Ismaaciil: "Waxaan arkay rag dhimanaya iyo kuwa kale oo iska cararaya oo aan fikrad ka haysan ... - Politicians in the News
Ismaaciil: "Waxaan arkay rag dhimanaya iyo kuwa kale oo iska cararaya oo aan fikrad ka haysan …
Maj Kinan Farzat waa mid ka mid ah askarta Suuriyaanka ah oo la sheegay inuu ku dhintay dagaalka Nagorno-Karabakh
Turkiga iyo Azerbaijan ayaa beeniyay in calooshood u shaqeystayaasha Suuriya loo isticmaalay gulufkii dhawaan ka dhacay Nagorno-Karabakh laakiin afar reer Siiriya ah ayaa BBC-da u sheegay in ka dib markii ay iska diiwaangaliyeen xadka Azerbaijan, in si lama filaan ah loogu tuuray dagaalka ka socda jiida hore.
Waxay ahayd bishii Ogosto ee sanadkaan markii ay bilwodeen wararka sheegayay in goobaha ay fallaagadu gacanta ku hayso ee waqooyiga Suuriya ay ka jirto shaqo mushahar fiican leh oo dibedda looga baahan yahay..
“Waxaan lahaa saaxib ii sheegay in ay halkaasi ka jirto shaqo aad u fiican oo aad qaban karto taasi oo ah in aad joogeeyso baraha koontorool ee Azerbaijan”, waxaa sidaasi ii sheegay nin da’ ah.
“Waxay noo sheegeen in shaqadeena ay tahay oo keliya in aan joogeyno xadka inagoo ah nabad ilaaliyeyaal. 200 oo doolar ayay bishii bixinayeen. Waxaan dareenay iney tani tahay nasiib wanaagsan,” ayuu ii sheegay nin kale oo aan ugu yeerayo Qutaiba.
Labuduba waxay codsadeen shaqada iyagoo u maraya kooxaha mucaaradka ah ee uu taageero Turkiga kuwaasi oo ka soo horjeedo madaxweyne Bashar al-Assad.
Raggan ayaa ku nool goob maalintii uu qofka ku shaqeynayo 1 doolar, waxayna tani u arkeen fursad wanaagsan oo uu Alle ku maneystay.
Markii ay tagayeen Azerbaijan waxay raaceen diyaarad uu leeyahay milatariga Turkiga.
Balse shaqada loo soo bandhigay ma aysan ahayn sidii loo maleeynayay. Raggan oo intoo badan haysta khibrad milatari ayaa waxaa loo shaqaaleysiiyay iney dagaalka ka qeyb galaaan, waxaana durbadiiba la geeyay aagagga hore waxaana lagu amray iney dagaalamaan.
“Marnaba ma fileyn inaan badbaadayo,” ayuu yiri Qutaiba. Waxay u muuqatay inaan haysto fursad boqolkiba 1 oo geerida ayaa nagu weegaarsanayd.”
Nagorno-Karabakh waa dhul lagu muransan yahay oo ku jiray gacanta Armenia intii lagu guda jiray iskahorimaad dhiig ku daatay oo markii dambe ku dhammaaday xabad joojin 1994.
Tobanaan kun ayaa dhintay boqolaal kalana waa la barakiciyay, kuwaas oo kasoo jeeda deegaanka la isku haysto iyo dhulka ku hareeraysan ee ay qabsadeen xoogagga Armenia.
Bulshada caalamku ma aqoonsan Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday ee Artsakh (magaca Armenia ee Nagorno-Karabakh) iyadoo sanadkaan ay dareemeen awooddooda millatari ee sii kordheysa, Azerbaijan waxay go’aansatay inay weerar ku qaaddo Armenia.
Inkastoo ay Azerbaijan iyo Turkiga oo xulafa la ah ay gaashaanka u daruureen iney jiraan calooshood u shaqeystayaal reer Suuriya ah oo ka qeyb galaya dagaalka Azerbaijan iyo Armenia balse baareyaal ayaa soo bandhigay sawirro cadeyn ah oo laga soo jaray muuqaallo ay dagaalyanada ku baahiyeem baraha bulshada, kuwaasi oo muujinaya sheeko ka duwan tan Turkiga iyo Azerbaijan ay ku doodayaan.
Dagaalyahannada aan la hadlay waxay la kulmeen dagaal culus oo waxay umuuqdeen kuwo uu soo gaaray dhaawac dhanka maskaxda ah. Ma aysan dooneynin in la aqoonsado, iyagoo ka baqaya aargoosi kaga yimaada taliyeyaasha maleeshiyada, sidaas darteed waxaan u u bixiyay magacyo kala duwan.
“Dagaalkaygii igu horreeyay waxa uu bilowday maalin un ka dib markii aan imid,” ayuu Ismaa’iil.
“Aniga iyo 30 qof oo kale ayaa waxaa loo diray jiidda hore ee dagaalka. Waxaanu lugeeynaynay ilaa 50 mitir markii uu durbadiiba gantaal ku soo dhacay agteena. Dhulka ayaan isku tuuray. Gantaallada waxay sida roobka noogu da’yeen muddo 30 daqiiqadood ah daqiiqadahaasi waxay ila noqdeen sannado badan. Markaasi ka dib ayaan ka shalaayay inaan imaado Azerbaijan.”
“Ma aanu garaneynin waxa aan sameyno, iyo sida aan uga falcelin karno arrintan,” ayuu yiri Samiir oo intaasi ku daray in qaar badan oo ka mid ah asxaabtiisan aysan lahayn khibrad milatari amaba tabar.
“Waxaan arkay rag dhimanaya iyo kuwa kale oo iska cararaya oo aan wax fikrad ah ka haysan halka ay u cararayaan, sababtoo ah waxay iska ahaayeen dad shacab ah.”
Dhammaan raggan ayaa sheegay in la siiyay qalab aan ku filnayn ama taageero dhanka dawada ah. Inta badan asxaabtoodii ka barbar dagaalamaysay waxay u dhinteen dhiig bax ka soo gaaray dhaawacyo fudfudud oo ay si sahlan u dawyen kareen dhakhaatiirta.
Muqaal uu iska duubay dagaalyan Suuriyaan ah oo lagu magacaabo Mustafa Qanti
“Xilligii igu adkaa wuxuu ahaa markii mid ka mid ah asxaabteyda uu dhaawac soo gaaray,” ayuu yiri Ismael, oo isagu markii dambe isbitaalka loo dhigay dhaawacyo ka soo gaadhay firirka gantaallada. “20 mitir ayuu ii jiray markii madaafiicdu soo dhacaysay, waxaan arkay isagoo dhacaya, waa uu ii yeerayay isagoo qaylinaya. Laakiin agtiisa waxaa lagu arkay qoryaha darandooriga u dhaca ee Armenia. Waan caawin kari waayay. Ugu dambeyntiina wuu dhintay.”
Qiyaasaha ayaa ku kala duwan tirada dhimashada saxda ah ee dagaalyahanada Suuriya. Kooxda la socodka arrimaha Suuriya ee Xuquuqda Aadanaha, oo ah koox fadhigeedu yahay Ingiriiska oo kormeerta colaadda ka taagan Suuriya, ayaa tirada ku sheegtay in ka badan 500.
Xigashada Sawirka, Jesr Press
Askar Suuriyaan oo iska duubay muuqaal
wpaadmin2020-12-13T12:19:30-06:00December 13th, 2020|Categories: Syria|Tags: Bashar al-Assad|
Ireland Canada Uganda Egypt Russia Germany United Kingdom Armenia Kenya South Africa China United States Mexico Tanzania Argentina Iran India Nigeria France Brazil Ethiopia Israel Turkey United Arab Emirates Palestine